Black sy Tan Coonhound, amboa manana fofona fofona fatratra | Tontolo alika
Black sy Tan Coonhound, amboa manana fofona faran'izay tsara
Sary - AKC.org
Ny alika dia manana fahatsapana fofona mandroso kokoa noho ny antsika, fa amin'ny tranga Black sy Tan Coonhound dia hafahafa ny fahafahany mahatsapa fofona. Raha ny marina dia io no iray amin'ireo fahaiza-manao ankafizin'ny olombelona. Fa izy koa dia namana mahafinaritra izay ho tian'ny fianakaviany haingana.
Satria karazany tsy fantatra amin'ny toerana maro izy ireo ary tianay ianao hampahafantarina tsara izay rehetra misy, amin'ity indray mitoraka ity hampahafantatra anao izahay .
1 Ny niandohana sy ny tantaran'ny Black and Tan Coonhound
3 Fihetsika sy toetra
4 Mikarakara ny Black sy Tan Coonhound
6 Sarin'ilay Black sy Tan Coonhound
Ny niandohana sy ny tantaran'ny Black and Tan Coonhound
Sary - Pets4homes.co.uk
Misy teoria roa momba ny tantaran'io karazany io. La voalohany amin'izy ireo dia milaza fa izy io dia avy amin'ny Talbot hound, izay niaina arivo taona lasa tany Etazonia. Ny mponin'ny tendrombohitra Ozarka sy ny Smokies dia nisafidy ireo santionany izay liana indrindra tamin'izy ireo ary niampita azy ireo hanomezana ilay karazany fantatsika ankehitriny.
Teoria hafa Na izany aza, nanazava izy fa tena avy amin'ny fiampitana ny Fox Hounds miaraka amin'i Bloodhounds izay nohafarana avy tany Angletera nankany Amerika Avaratra tamin'ny taonjato faha-XNUMX.
Alika lehibe izy io, milanja 38kg eo ho eo ny halavany ary 58 sy 68cm ny haavony, ny vavy kely kely noho ny lahy. Ny vatany dia matanjaka, matanjaka, vita amin'ny taolana sy taolana mivoatra be mandroso. Ny volo dia fohy, matevina ary mainty ary miloko mainty ary misy teboka mainty eo ambonin'ny maso, amin'ny lafiny roa amin'ny vava, amin'ny tratra, amin'ny tendrony ary amin'ny lafiny anatiny amin'ny feny.
Manana androm-piainana 10 hatramin'ny taona 12.
Sary - Dogwallpapers.net
The Black sy Tan Coonhound tena alika be saina sy be herim-po izy izay tia manaraka làlana hanitra mahaliana. Toy izany koa, tsy hisalasala izy hitady izay mety ho rembiny raha vantany vao misy ny fotoana mety, fa mitandrema, tsy midika izany fa manana toetra matanjaka izy, fa ny mifanohitra amin'izay no tiany: tiany ny olona miaraka aminy ary afaka mahazo ho be fitiavana miaraka amin'ny fianakavianao.
Tsy maintsy hisy izany Ampiofanina, toy ny alika hafa, hatramin'ny andro voalohany nodiany an-trano ka, rehefa olon-dehibe, dia hainy ny mifampiresaka amin'ny hafa.
Mikarakara ny Black sy Tan Coonhound
The Black sy Tan Coonhound Tsy maintsy omena sakafo Barf, sakafo Yum, na sakafo misy hena sy / na trondro. Raha misafidy ny safidy farany ianao dia tsara fa ny haben'ny kibble dia ampy ho an'ny alika mitombo lehibe. Ary, raha omenao alika kely izy, satria kely kokoa ny habeny, dia mety ho sempotra izy, indrindra raha mihinana haingana. Mifanohitra amin'izany no izy, raha marina ny habeny, dia hitsakoana bebe kokoa ny sakafo izy ary noho izany dia kely dia kely ny loza ateraky ny olana.
Raha miresaka ny ora tokony hihinanana azy isika dia miankina amin'ny filan'ny alika ihany. Mandritra ny fahatanorany dia mila mihinana in-3 ka hatramin'ny 5 izy, fa rehefa mihalehibe sy mihamatotra dia mila mihinana in-2 na in-3 isan'andro.
Ny palitao manjelanjelon'ny alikanao dia mila fikolokoloana andian-tsarimihetsika mba ho tsara. Ny fandroana isam-bolana sy ny fikosehana isan'andro dia tokony ho ampahany amin'ny fiainanao. Tokony handinika ny sofiny sy ny masony koa ianao indraindray mba hahazoana antoka fa madio sy salama izy ireo. Raha sendra hitanao fa maloto izy ireo, maimbo ary / na misy vongana, manatona ny mpitsabo anao.
Alika somary milamina io, io hankafy ny fitsangantsanganan'ny mpianakavy ianao. Nefa mitandrema, fa tena ilaina koa ny manaitaitra ny sainy, ohatra, mampianatra azy fikafika na mifanerasera aminy amin'ny alàlan'ny lalao mifandraika amin'ny alika.
Raha ny fahasalaman'ny Black sy Tan Coonhound, dia tsy ratsy amin'ny ankapobeny, ny mifanohitra amin'izay no izy. Mety voan'ny sery hafahafa na gripa ianao, toy ny alika hafa, fa ny karazany dia tsy manana aretina manokana, toy ny amin'ny hafa.
Saingy ambany ny risika harary raha sendra mandray vaksiny ianao ary isaky ny miahiahy ianao fa tsy salama. Ohatra, raha very ny fahazotoan-komana, voan'ny tazo, ary / na tsy misy lisitra izy dia tokony hifandray amina mpitsabo aretin-biby mba hanaovana fizahana sy fitsaboana.
Raha vonona hiaina taona tsy mampino miaraka amin'ny alika be fitiavana sy mendrika ianao, dia tokony ho adidinao fa manodidina ny vidin'ny alika kely 400 euros.
Sarin'ilay Black sy Tan Coonhound
Ity dia karazan'olona manana endrika sy endrika mampientam-po. Raha te-hahita sariny bebe kokoa ianao dia mila tsindrio fotsiny ireo sary tsirairay asehonay anao eto ambany:
Sary - Enjoyhuntinglife.com
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Taranaky ny alika » Black sy Tan Coonhound, amboa manana fofona faran'izay tsara
Fa maninona ny alika no milelaka tongotra?